"Ruqo ninkii Lahaa Dabada Hayaa Ma Kacdo." Xirsi Ma Madaxweynaha ayaan tanaasulayn mise Mucaaradka ayaan tudhayn?
Thursday 14th March 2019 11:30:59 in Wararkii Maanta by Xafiiska Hargeysa
Haddaba waxaan leeyahay weli xal waa la gaadhi karaa, inaga oo ka shidaal qaadanayna xikmadii ahayd "If there is will there is a way” oo macnaheedu tahay, "Hadii doonisi jirto, dariiq waa la helaa”. Xalka waxaan u arkaa in lagu heshiin karo in meel dhexe la isugu yimaado. Gurmadkaa waxaa geli kara sadex qolo midkood haddii ay is kaashadaana waa ka sii wanaagsantahay waxaanay yihiin: –
Madaxweynaha Somaliland Oo Xafiiskiisa Ku Qaabiley Arday Kaalmaha Hore Ka Galay Tartankii Jabuuti Ka Dhacay [Muuqaal]